Tag: nsusu ọnụ | Martech Zone
Dị ka ndị ahịa, anyị na-etinye oge na-ewepụta mkpọsa ọhụụ, mana anyị anaghị arụ ọrụ dị mma mgbe niile na-ele anya n'enyo na-anwa iji bulie mgbasa ozi na usoro anyị ugbu a. Fọdụ n'ime ihe ndị a nwere ike bụrụ na ọ karịrị akarị… olee ebe ị ga-ebido? Enwere usoro maka njikarịcha mgbanwe ntụgharị (CRO)? Ee ee… enwere. Ndị otu nọ na ndị ọkachamara na-agbanwe mgbanwe nwere usoro CRE nke ha nke ha na-ekerịta na ihe omuma a ha tinyere
Anyị egosipụtala ụfọdụ ezigbo akwụkwọ akụkọ gbasara etu agba si emetụta agwa ịzụta. Kissmetrics ewepụtawokwa ihe omuma nke na-enye ihe ntinye na iche banyere otu okike. O juru m anya na iche… na oroma lere anya dị ka ọnụ ala! Nchọpụta ndị ọzọ na agba na Gender Blue bụ ụcha kachasị amasị ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Green na-egosipụta mmetụta nke ntorobịa, obi-ụtọ, ịhụnanya, ọgụgụ isi, na ume. Tendmụ nwoke na-achọkarị ịmịcha agba, ma
Ọ na-adịkarị ka otu ndị otu na KISSmetrics bụ otu nzọ ụkwụ n'ihu usoro a, ha nwere ike ịmeghachi ya na mgbakwunye a. Ọ bụrụ na ị mepee akụkọ nchịkọta Google Analytics, ị ga-enweta ụfọdụ data na-atọ ụtọ banyere etu ndị mmadụ si abịa na ịhapụ saịtị gị yana ọnụọgụ nke okporo ụzọ na-esite na ya… mana ị nweghị ike ịmata n'ezie ụzọ ndị mmadụ na-ewere. Anyị nwere onye ahịa ugbu a na anyị nyere nghọta